August waa bil Akshay Kumar guuleestay halka SRK guul dareestay iyo aflaantii soo baxeen bishan | Filimside.net
Home » Arimaha Bulshada » August waa bil Akshay Kumar guuleestay halka SRK guul dareestay iyo aflaantii soo baxeen bishan
Bisha August waa gabo gabo maanta ayay ku eg tahay madaama 31 tahay waxaan dib loo milicsada 4-tii todobaad ee lasoo dhaafay filimada tiyaatarada la saaray iyo saameyntii ay la imaadeen.
Si guud August waxaa lagu tilmaamay bil Akshay Kumar Bollywood-ka bad baadiyay halka Super Star-kii weynaa Shah Rukh Khan uu guul daro xoogan la kulmay.
Guuleestayaasha bisha August 2017: Waa mid iska cad Akshay Kumar filimkiisa Toilet Ek Prem Katha ayaa Super Hit weyn noqday sidoo kalena Bollywood-ka ka saaray abaartii mudada 4-bilood heesay, wuxuu filimkaan galay liiska 100 Crore sidoo kalena macaash xoogan ayay ka heleen kooxda cajaladaha qeybiyaan iyo kuwa tiyaatarada iska leh.
Filimka labaad ee sida la yaabka leh u guuleestay Bareilly Ki Barfi oo aan marnaba laba fileyn inuu Boxoffice-ka galaan gal ku yeelan karo.
Filimkaan ay wada jileen Ayushmann Khuranna, Kriti Sanon iyo Rajkumar Rao ayaa guul dhex dhexaad ah gaaray wuxuuna noqday Average.
Kuwa Guul Dareesteen bisha August 2017: Muran kama taagno in SRK guuldarada ugu weyn ku dhacday madaama filimkiisii la wada sugaayay Jab Harry Met Sejal uu Flop noqday sidoo kalena 60 Crore darajo ahaan dhaafi waayay!
Sidharth Malhotra isagana awoodiisa xadidneyn dhulka ayay sii gashay madaama filimkiisii A Gentleman uu bur buray waxaana ku dhacay qasaaro xoogan kooxda iska leh asigoo noqday Disaster.
August maxaa laga bartay: waxaa laga bartay filimkii daawadayaasha ka helaan ama isku sheeg sheegaan (word of mouth) inaan la celin karin oo uu gadmaayo, Tusaale Bareilly Ki Barfi iyo Toilet Ek Prem Katha oo lasoo wada dhaweeyay.
Filimkii xuna sheekadiisa si dhaqsi ah tiyaatarada kaga dagaayo oo ay daawadayaasha isku sheeg sheegayaan sidaa darteed Jab Harry Met Sejal iyo A Gentleman inay si dhaqsi ah u fashilmaan sheekadooda oo liidato ayaa ugu wacneyd.
Awooda Atoorayaasha August: Hubanti Akshay Kumar awoodiisa atoorenimo (Star Power) halkii ugu sareesay ayay August gaartay madaama uu Bollywood-ka ka saaray abaar ay ka saari waayeen Salman Khan iyo Shah Rukh Khan 4-tii bilood ee ugu dambeesay.
Rajkummar Rao inaba caadi ma ahan bandhiga uu ka sameeyay filimka Bareilly Ki Barfi oo guul dhex dhexaad ah gaaray halka Ayushman iyo Kriti guusha uu gaaray filimkaan dhiig joojin u yahay madaama filimadii ay sanadkaan horey u keeneyn guul dareesteen.
Waxaa Aqrisay 663